Tag Archive for "ग्लोबल आइएमई" - ११औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ग्लोबल आइएमईको वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम
११औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ग्लोबल आइएमईको वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम
१५ माघ, काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लि. ले आफ्नो ११ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत माघ १३ गते वित्तिय साक्षरता जगाउने उद्धेश्यले बाग्लुङ्ग जिल्लाको बुर्तिबाङ्गमा “वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम” संचालन गरेको छ । बैंकका “तालिम तथा बैंक बिज्ञ” पुर्णमान नापितले बुर्तिबाङ क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विद्यार्थी, व्यापारी, सरकारी तथा गैह्र सरकारी कर्मचारी, आमा समूह तथा अन्य स्थानीय बासीहरुलाई बैंक तथा वित्तियको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
ग्लोबल आइएमईको थप २ शाखारहित बैंकिङ्ग सुरु
२ माघ, काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले मिति २०७४ पौष २९ गते शनिबार देखि बाग्लुङ्ग जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिका ५, बिँहुपोखरा तथा मिति २०७४ माघ १ गते सोमबार सोहि जिल्लाको बाग्लुङ्ग नगरपालिका १३, पयुँपाटामा आफ्नो ५९ औँ र ६० आँै शाखारहित बैकिङ्ग सेवा सुरु गरेको छ । बाग्लुङ्ग नगरपालिका १३, पयुँपाटामा खोलिएको सेवाको २०७४ माघ १ गते सोमबार बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले एक समारोहका बीच उद्घाटन गरेका थिए । उक्त स्थानमा खोलिएको सेवाको लागि स्थानिय उषा रानी शर्मा तथा विँहुपोखरामा खोलिएको सेवाको लागि स्थानिय महेन्द्र पुनलाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
ग्लोबल आइएमईको कर्पोरेट/रजिष्र्टड कार्यालयको समुद्घाटन
१९ पुस, काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लि. को ११औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकको नवनिर्मित कर्पोरेट/रजिष्र्टड कार्यालयकोे नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरंजिवी नेपालले हिजो मंगलबार समुद्घाटन गरेका छन् । सन् २००७ मा वीरगञ्जमा रजिष्टर्ड कार्यालय राखि स्थापना भएको ग्लोबल आइएमई बैंक लि. ले स्थापनाको ११ वर्ष मा नै आफ्नौ कर्पोरेट÷रजिष्र्टड कार्यालय स्थापना गर्न सफल भएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक ग्लोबल आइएमईमा विलय हुँदै
९ असार, काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको विशेष साधारण सभाले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ती गर्ने सम्बन्धि विषेश प्रस्ताव पारित गरेको छ । काठमाडौंमा गरेको विशेष साधारणसभाले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो । बिगत ११ वर्षदेखि बैंकिङ्ग कारोबार गर्दै आएको रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको चुँक्ता पूँजी १ अर्ब १ करोड ४ लाख रहेको छ । सोही क्रममा सभाले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक लि. को १०० कित्ता शेयरलाई ग्लोबल आइएमई बैंक लि. को ८२.९० कित्ता शेयर दिने गरी शेयर स्वाप अनुपात कायम गर्नेसहितको विषेश प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्